Apple Pay miaraka amin'ny Visa sy MasterCard dia misy any Suisse | Avy amin'ny mac aho
Apple Pay miaraka amin'ny Visa sy MasterCard dia misy any Suisse izao
Nambara nandritra ny fehezanteny farany WWDC natao tamin'ny volana Jona ary ankehitriny ireo mpampiasa izay monina any Suisse dia efa afaka mampiasa ny fomba fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny karatra Visa sy MasterCard any Suisse. Apple dia efa nilaza fa io fomba fandoavam-bola io dia ho hita ao amin'ny firenena ary efa ananan'izy ireo izany amin'ny mpampiasa any Etazonia, Aostralia, Kanada, Sina ary Royaume-Uni. Tsy ho ela dia ho hita ihany koa any Frantsa sy Hong Kong, fa amin'izao fotoana izao dia efa misy any Suisse.
Any Suisse izao, ny mpampiasa dia afaka manampy ireto karatra roa ireto ary mandoa vola amin'ny alàlan'ny iPhone na Apple Watch any amin'ny magazay izay ananany dataphone misy NFC. Hitanay fa tena mahaliana sy azo antoka ny fampiononana sy ny fandoavana ny fandoavam-bola amin'ity fomba ity tokony hajaina haingana kokoa manerantany amin'ny fikajiana ny fotoana nahavitana azy, izay hatramin'ny 2014.
Ny vaovao avy any afovoany AppleInsider Iray amin'ireo tianay izy io nefa miaraka amin'izay dia somary mitsiriritra ireo mpampiasa miandry ny fahatongavan'ity serivisy fandoavam-bola ity izahay amin'ny alàlan'ny Apple Watch sy iPhone any Espana. Ny vaovao momba ny mety hahatongavan'ny firenentsika dia tsy dia mazava loatra ary Azo heverina fa na eo aza ny fanambarana ofisialy ny fahatongavany mandritra ity taona 2016 ity dia hanjavona na mety tsy ampiasaina eto akory.
Miandry an'i Apple hitondra azy izahay fa ny tsaho momba ny fahatongavan'ity serivisy fandoavam-bola ity dia miha-manjavona hatrany. Ny fandehan'ny fotoana sy ny fifampiraharahana kely na tsia izay toa tanterahina avy any Cupertino miaraka amin'ireo andrim-panjakana ara-bola any Espaina ataon'izy ireo hieritreritra izahay fa mety hahafoana izany. Ho hitantsika ny zava-mitranga mandra-paran'ny faran'ity taona ity, na dia misy fiainana aza misy fanantenana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Apple Pay miaraka amin'ny Visa sy MasterCard dia misy any Suisse izao
Apple namoaka macOS Sierra 10.12 Beta ho an'ny daholobe androany